izakhamuzi ucabanga Law waqala ukuba athuthukiswe ngo-2012, kodwa wamukela kwakungeyona kudala - ngo-2015. Akubona bonke abanamacala ku kubolekisa ngemali kwakungafanele kuphela, ngakho-ke abantu abaningi eRussia ukwethulwa umthetho laliyisenzakalo wamukelekile. Kungakhathaliseki noma cha ukuqalisa inqubo ucabanga? Yini odinga ukuyazi ubuqili okweletayo?
Kungani lo mthetho usuyasebenza?
Nge abaseRussia izikweletu zize landa unyaka we loan ngayinye. Ngokwe-Central Bank, kusukela ngomhla ka-1 Januwari ngonyaka odlule, isikweletu Imininingwane izakhamizi zaba ruble ezingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingu-600, futhi ngo-2014 kwaba ingxenye eyodwa kancane. Umthetho kuhloswe ukuba abe nethonya elihle emkhakheni umthengi obolekisayo. Zenzalo emalini ebolekwe sikhule njalo ngonyaka, njengoba babebeke izingozi yokukhokha nokungalaleli. Isimo esifanayo naleleli yokukhokha tamasipala. Umthetho osebenza ku zonke izinhlobo izikweletu.
izakhamuzi ucabanga Law: essence, amalungiselelo main
Julayi 1, 2015 Waqala ukusebenza uMthetho Federal nenombolo 476. Ngokusho koMthetho, ekhona umthetho ucabanga (noma ngongakwazi ukukhokha izikweletu) kanye nenombolo yezinye izenzo uchitshiyelwe, elawula inqubo nokusizwa kwalabo abangaboni izakhamuzi nakwabangenangqondo.
Kusukela ngalowo mzuzu kuqhubeke izakhamuzi kabani izikweletu abakweletwayo okweqa 500, 000 nokuba ukubambezeleka nokukhokhwa izinsuku ezingaphezu kwezingu-90 ungafaka isicelo enkantolo ukuqashelwa yimali yabo. Ngesikhathi esifanayo isakhamuzi inqubo ucabanga kungenzeka isinyathelo lesikhungo lesikweletu noma isevisi intela. Ngokwalo mbiko 214th koMthetho, inqubo ucabanga ngokuba osomabhizinisi ngabanye nsé ukuthi isetshenziswa bamazwe.
Ngo Article 213, isigaba 1, wathi ulwazi mayelana nezinqubo kulotshwe Federal Bhalisa futhi ayikwazi ukushicilelwa e imithombo ezisemthethweni. Ukuze ukudalulwa kungenzeka zibe ngaphansi kwe ulwazi ukuqashelwa abantu ngokomzimba yimali, kwethulwa izikweletu ukuhlelwa kabusha inqubo kanye nokusentshenziswa kwe impahla yabo.
Isici yomthetho ukuba hlanganisa indawo esemthethweni ukubhalisa umuntu.
Izimpawu ucabanga of isakhamuzi: nenqubo sokuba ngongakwazi ukukhokha izikweletu
Umuntu wemvelo ime ngokuphelele ukukhishwa izikweletu credit izikhungo.
Isakhamuzi abukwamukelanga izinkokhelo ayimpoqo ukuthi bavela ngenxa nezinsuku.
Uma esikhathini ukubulawa esikweletini bekulokhu izinsuku ezingaphezu kwezingu-30, futhi ubukhulu bawo Imininingwane ingaphezu 10% yesamba semali ekhokhwa.
isakhamuzi ukubaluleka impahla lemali kakhulu engezansi izikweletu.
Uma isakhamuzi has a lesinqumo isiphelo sesimiso umangalelwa nofana umangali ukuphoqelelwa, ngoba akanawo impahla ukuthi ingalandwa.
Ngubani ongamemezela ucabanga
Akuwona wonke isakhamuzi Russian ongamemezela ngokwakho ungeke uzithole usuwile. Ngaphansi komthetho omusha kungenziwa ngezindlela ezintathu:
Lapho inani izikweletu lidlule ruble ayizigidi 500.
Lapho okweletayo ungakwazi ukubonisa ukuthi alinaso kungenzeka ukukhokha imali ukufeza isibopho sakhe.
Kweleti kufakazela ukuthi uzama ukukhokha izikweletu futhi ukuphothula isivumelwano kabusha ezibophweni ezingokwezimali.
AbaLawula (Ukuqothuka) ka isakhamuzi Russian Federation ayikwazi limenyezelwe lapho isamba izinkokhelo zenyanga ngaphansi inkontileka ne ayemkweleta idlula imali yangempela yomuntu. Kulokhu, inkantolo ingathatha kuphela isakhamuzi ezikweletini, kodwa izikweletu Kungenxa yalesi sizathu ngeke ukhokhiswe.
Izingozi ukuze okweletayo
Ukuqala okweletayo-isakhamuzi ucabanga ekuqhutshweni kusikisela ukuthi akabakhathalele kangakanani abantu imali ukuba isifundazwe sikhokhele izikweletu zamanje. Ngenxa yalokho, bailiffs ziyophoqeleka ukuba bathengise impahla yayo. Zonke kuthengiselana impahla mayelana ukudluliselwa umndeni wakhe, izokhanselwa. Kungase kuzokhanselwa futhi inkontileka ka umnikelo. Uma impahla lobunikazi ngokuhlanganyela, yathengisa impahla okungewakho okweletayo. Uma ungeke uzithole usuwile - IP, ukhansele wonke amalayisensi kanye nesitifiketi sokubhalisa isimo usomabhizinisi.
Yokutakula akunakwenzeka ukuphoqelela zonke impahla okweletayo. Ukuphuca lungekho ngaphansi ingcebo uma kuba - endaweni kuphela lokuhlala okweletayo sika. Kusebenza umthetho ofanayo impahla ukuthi u aluthola ngosizo credit (uma kungeyena isihloko impikiswano). Ukuphuca asisebenzi izingubo, izicathulo, ekhaya lokubhalela izinto, imiklomelo, imiklomelo isimo.
Ukuqothuka izakhamuzi - inqubo multi-esiteji, kuyinto kwethulwa okuyinto engenzeka kuphela ngesinqumo sokwahlulela arbitral. Ukuze wenze lokhu, inkantolo kufanele athumele isicelo ezifanele. Uma isicelo sithathwa evumelekile ke izinyathelo ezilandelayo zithathwa:
Nezikweletu ukwakha kabusha.
Ukugcwaliseka nezimpahla ezithathekayo, awanakususwa we nakwabangenangqondo.
A isivumelwane (amaqembu ongafinyelela ukusilela, futhi kunjalo sichithiwe).
Inqubo ukuthengiswa kwempahla - isilinganiso kakhulu. Lusebenza kuphela lapho uhlelo ukuhlelwa kabusha awuzange mayunithi umuntu. Impahla, owawungumnyaka atholakale okweletayo ngesikhathi senkantolo noma bathenga ngemuva kokuthi wadayiswa endalini.
Nezikweletu ukuhlelwa kabusha uhlelo
Ukuqothuka izakhamuzi - esilinganisweni, okuyinto isinyathelo sokuqala kabusha izikweletu. Inhloso yayo ukuze uyothuthukisa kungenzeka isakhamuzi ukukhokha izikweletu abakweletwayo, usebenzisa yonke imithombo kungenzeka imali. Ngokusho inkantolo athuthukile uhlelo, eyohlanganisa isikhathi kanye nosayizi, kanye sokukhokhwa ekukhokheleni izinzalo ezikweletini. Ukuthuthukiswa lolu hlelo isixhumanisi emaphakathi esimweni ezikweletini. Loluhlelo has a eside esiphezulu ukugcwaliseka - iminyaka engu-3. Nokho, lungase luboniswe yinkantolo.
Ngokomthetho, izikweletu ukuhlelwa kabusha angasebenza kumuntu uma:
Isakhamuzi has a umthombo engenayo.
Awukho umlando lobugebengu emkhakheni ubugebengu kwezomnotho (isikhathi sokuba ashushiswe noma iphelelwe yisikhathi).
isakhamuzi-okweletayo ucabanga ayibonwa iminyaka 5.
ngomklamo ukuhlelwa kabusha engakaze athuthukiswe futhi ayigunyazelwanga iminyaka 8 ngaphambi kokuqala le nqubo.
Inani imali oyikweletayo ngaphansi kwalesi uhlelo futhi kufakwe isithakazelo ngesisekelo izimangalo ayemkweleta sika. Ngakho usayizi isithakazelo oluhambisana ngesilinganiso refinancing CBA.
Njengoba uhlelo uyabulawa
Njengoba sokukhokhwa okweletayo kuya lomumo elivunyiwe unelungelo lokwenza iziphakamiso mayelana nokwenza izinguquko kuso. Lokhu kufanele baziswe ngumphathi zezimali. Uma isimo sezimali okweletayo kuthuthukisa abakweletwayo isicelo enkantolo ukulamula umbango, lapho uhlelo kushintshiwe.
Lapho elithi we plan luphela, umphathi wezimali silungiselela umbiko, esagcina ethunyelwe inkantolo kanye nesikhungo credit. Uma izimangalo ayemkweleta sika kungukuthi kuyahlangatshezwana ngendlela esifike ngesikhathi, bese uyahamba enkantolo.
Kulokhu, inkantolo ingathatha omunye izixazululo ezimbili:
Qedela inqubo yokuhlela kabusha.
Bona ucabanga yezakhamuzi.
Izizathu ememezela ucabanga kungenzeka eziningana:
Sekwephuzile izikweletu ukuhlelwa kabusha uhlelo.
Loluhlelo ayitholanga imvume izinhlangano credit.
Khansela ukuhlelwa kabusha yinkantolo.
Uqalise zokukhiqiza ucabanga zokwahlulela.
Ukuqothuka izakhamuzi (abantu zemvelo) kuhilela ukuqaliswa impahla abanamacala '. Ngu senkantolo ingaphinda labeka imingcele travel phesheya. Nemikhawuko kuphela zisuswe ekuphetheni inkambo Isivivinyo. Kungase kukhanselwe kusengaphambili kuphela endabeni okhuleka isakhamuzi, futhi isivumelwano nabantu abakweletwayo.
Lapho okweletayo kuthiwa ayinamali, wonke amafa idluliselwe umphathi wezimali. Zonke impahla yokuhweba uyize ngaphandle kwakhe. Lokhu kusebenza futhi imali kuma-akhawunti asebhange, kanye nokusebenza impahla izibopho yizinkampani zangaphandle.
umsebenzi Ukuhlolwa kwenziwe ngaphansi kokuqondisa umphathi wezimali. Ukuzihlola angase abanjwe isinqumo abantu abakweletwayo kwezimali zabo. Nakuba kungase balinganisela ngokwalo kumele kubukanwe enkantolo.
Uma nokuchithwa kwezimpahla lwenzeke nezinhlangano zokuthenga ngesikweletu Wenqabile bayiyise izikweletu akhawunti, izakhamuzi futhi nethinta bachithe kubo. Kulokhu, okushiwo abakweletwayo baziwa wanelisekile.
Le nqubo inikezelwe yilo umthetho. Ngezinye isisekelo sayo kukhona ukumisa kwecala. Isinqumo emhlanganweni abantu abakweletwayo futhi isivumelwano isivele enkantolo.
Emva kwesivumelwano ezikweletini ukuhlelwa kabusha uhlelo kukhanselwa, wasusa ukuvinjelwa ukwaneliseka okufunwayo abakweletwayo. Citizen wabe abuyisele izikweletu. Uma kungxenye yakhe i- imigomo yesivumelwano, kunjalo ucabanga iqalisiwe futhi.
Nebubi ngoba kwakungenzeka ukuba okweletayo
Ucabanga yezakhamuzi Russian - inqubo okudinga izindleko impahla (inkokhelo izindleko enkantolo namasevisi control).
Wonke ama-akhawunti, kufaka phakathi ngokuhlanganyela, simisiwe.
Kuboshwe impahla okweletayo sika.
Ngo emva ukuqashelwa okweletayo ucabanga eminyakeni emithathu kungase kungabi umsunguli kwenhlangano engokomthetho.
Zona kuvinjelwe travel angaphandle.
Kule minyaka emihlanu emva ukuqashelwa isakhamuzi ucabanga ngeke bakwazi ukuboleka.
Uma ngaphandle ulwazi zezimali control inqubo ukuthenga noma ukuthengisa impahla, okweletayo ubhekene emihle evela 4000 kuya ruble 5000.
Ungakapheli nonyaka emva isinqumo senkantolo ayikwazi behileleke nakwezamabhizinisi.
Lapho izikweletu idlula enanini lomuzi, lemali esele emalini kusukela isakhamuzi, njengoba yena lase lingenamali yokuyikhokhela.
Lapho okweletayo ayizange ephethwe iyiphi enye impahla, ngaphandle efulethini lakhe, lapho isela lihlala khona.
Ngesikhathi kuqhubeka leli cala, izinhlawulo kanye nezinhlawulo kungukuthi icala.
Ukususa umthwalo ongadingekile.
Ukuze credit izikhungo, inqubo ucabanga ivumela ukuba alulame Inani eliphelele izikweletu, kanye iqhaza ukusatshalaliswa isukela ukuthengiswa kwempahla.
Fictitious ucabanga: Imiphumela ngoba kwakungenzeka ukuba okweletayo
Ukuze ucabanga ngamanga yezakhamuzi, okungukuthi, ukwaziswa okungamanga ngoFakazi solvency zabo, nomthetho wethula umthwalo wokuphatha. Ikhomishini icala igcwele inhlawulo, usayizi lovela 1000 ruble 3000.
Kuvele isigwebo zokuphatha inikezwa nezenzo ngamabomu okweletayo, okuyinto kuye kwaholela ekulahlekelweni pay nokungakwazi ukukhokha izikweletu ukuze abakweletwayo ngalesi simo.
Ukunika ulwazi olungamanga endaweni, amalungelo akhe, izikweletu, inani izikweletu, kanye neminye imininingwane zibheke isakhamuzi inhlawulo ruble 4,000 5,000. Ukuze ngabanye, inhlawulo ukuvimbela ngokungemthetho imisebenzi umphathi wezimali aqokwe enkantolo, kuze ruble 3000.
Uma uzama ukudlulisa kwamalungelo nezimpahla ezithathekayo, awanakususwa we yimali isengcupheni ejele kuze iminyaka 6.
Okweletayo, kuyinto efiselekayo ukwazi izici ucabanga of isakhamuzi. Umthetho aluphelele futhi unezitho eziningi impikiswano.
Kuzobe kungenzeka ibe ngaphansi kwegunya isilinganiso esiphansi imali eyayiyikweleta ukuba abakweletwayo ngalesi simo. Ngesikhathi ukuhlaziywa solvency ka okweletayo futhi inhlalakahle yokugcina ingadlulisela ilungelo lokusebenzisa impahla. Ukuze osomabhizinisi ukungakwazi loan imali kungaba uhlobo mthetho ukuze bafeze imisebenzi yayo. Nokho, lesi simo okukhonjiwe, ngoba izinkampani manje ezisebenza ukuhlinzeka ezezimali futhi ngemuva kokuthintana lezi izinqubo.
Ukuthola isimo yimali enamandla Nokho ngaphezulu -akusizi ngalutho izakhamuzi,. Inqubo ngokwaso kuthatha isikhathi eside. Umthetho kungaba ngcono isimo salabo eyayiyikweleta imali eningi futhi abakwazi ukukhokha izikweleti. Ukuqothuka akusho ngaso sonke isikhathi abe insindiso ngoba kwakungenzeka ukuba okweletayo.
Kanjani ukuba ngikhokhe inhlawulo traffic
Yiziphi ukulinganiselwa amalungelo nenkululeko yezakhamizi zakuleliya khona Lokhu kwakwenziwa ngayiphi injongo yethulwe?
Secondary School kanye Embassy Russian eNdiya
Umuthi "Chloe": izibuyekezo zakho, izincomo, izixwayiso
Pertussis: ekwelapheni ingane
Isikhundla Afrika maqondana nezinye amazwekazi nasolwandle, iziqhingi, amatheku, sisebunzimeni. Yiziphi izici indawo Afrika?
Metal: indlela ukubeka kahle. Ubuciko nokupakisha metal